Ndị ọkachamara na Semalt na-enweta ozi dị oke mkpa gbasara Mirai Botnet Attack
Dyn bụ otu n'ime ụlọ ọrụ ndị kachasị elu nke na-achịkwa ọtụtụ nchịkọta aha aha site na Mirai botnet na-eweta ihe karịrị 100,000 ụlọ ọrụ n'ịntanetị. Dị ka akụkọ ndị ụlọ ọrụ Dyn si kwuo, ọgụ Mirai botnet bụ otu n'ime ụdị dịka ọ nwere ike ịwakpo 1.2Tbps.
Andrew Dyhan, Semalt Onye ahịa na-eme nke ọma, na-ekwu na mwakpo Mirai botnet bụ ọnwu ma e jiri ya tụnyere nkesa ndị a na-aghara aghara. Mgbasa DDoS kpamkpam na-adabere na netwọk otu netwọk na-emeghị njem ruo mgbe ọ na-akụda. Dị ka otu blog bipụtara na nso nso a bụ nke Dyn bipụtara, e mere Mirai botnet site na netwọk nke ihe (IoT) ngwaọrụ dịka ngwa DVR na kamera dijitalụ.
Olee otu botnet na - arụ?
Ewezuga itinye aka na mwakpo nke dyn Dyn, e jikọtara Mirai botnet na mbuso agha nke kụrụ otu nchekwa nchekwa data, 'Krebs on Security,' nke Brian Krebs, bụ otu n'ime ndị na-ede akwụkwọ Washington Post dere..Dika nkwuputa nke Brian Krebs mere, ihe agha nke kpochatara ihe nchekwa ozi ya bu ihe agha nke 665Gbps.
N'ihe mere n'oge na-adịbeghị anya, David Fidler, bụ onyeisi ụlọ ọrụ maka cybersecurity na Board on Foreign Affairs, kwuru na nkesa a na-ekesa nke agha agha nke dyn Dyn mere ka ọ kwatuo ebe dị elu dika Netflix, onye nche, CNN, Twitter, na Reddit. Ọtụtụ saịtị emetụta Mirai botnet dị na Europe na United States.
Fidler, onye ọkachamara na cybersecurity, kwuru akụkọ banyere ọgụ Dyn, bụ ebe Fidler kwuru na ya apụghị icheta ọnyà cyber na mwakpo ọgụ nke ihe karịrị 700Gbps. David Fidler kwukwara na òtù na ụlọ ọrụ nwere nnukwu nsogbu banyere nchekwa nke Ngwaọrụ 'Intanet nke Ihe', ebe ọ bụ na e nweghị ihe ngwọta dị mma nke akwadoro ịlụso ọgụ ahụ ọgụ dị ka nke fọdụrụ Dyn, bụ onye e gburu cyber.)
Dị ka otu akụkọ na-adịbeghị anya nke ndị ọkachamara cybersecurity na ụlọ ọrụ gọọmenti wepụtara, Dyn mere ka nsogbu ahụ na-enweghị nchebe dakwasị Dyn. Ka ọ dị ugbu a, nchọpụta nke usoro ntanetị Dyn na-arụ ọrụ na-aga n'ihu, ebe ụlọ ọrụ ahụ kwuru na Mirai botnet bụ agha kachasị na cyber nche na-emebi ịntanetị ma na-ewedata weebụsaịtị ndị dị na United States na Europe.
Joe Weiss, onye isi na-enye cybersecurity tinyere ngwọta na onye nta akụkọ na-ede na iyi egwu kọmputa, kwukwara okwu banyere egwu egwu Mirai botnet. Dị ka Weiss si kwuo, a na-ewere Mirai botnet dị ka onye na-agbanwe egwuregwu na ụlọ ọrụ cyber nchebe, ebe o siri ike ịkọwa ụdị mwakpo nke Mirai botnet.
Joe Weiss kwukwara na nkesa ịjụ agha na-amalite dị ka ọgụ na-adabere karịsịa ma gbanwee n'ime mwakpo ndị ọhụrụ. Weiss kwubiri site n'ịgwa na Mirai botnet bụ ụdị mwakpo nke pụrụ ịhapụ ụlọ ọrụ ọbụla na-ebuso ndị agha agha. Dịka ya si kwuo, ịrụ ọrụ na ịlụ ọgụ botnets bụ naanị ngwọta nke nwere ike ichebe usoro nchịkwa kọmputa site n'ịbụ ndị egwu egwu kọmputa. Chee anya na ị na-amụ anya na nyochaa ebe ọtụtụ okporo ụzọ gị si abịa iji zere ịbụ ndị botnets na-agbada Source .